I-Free Fall Hut: Ikhabethe le-rustic elinokubukwa kwengadi yezithelo
Hastings, Hawke's Bay, i-New Zealand
Indlu encane ibungazwe ngu-Julie
I-Escape to Free Fall hut, ikhabethe elihlome ngokuphelele epulazini lamajikijolo anelanga e-Te Awanga. Lena indawo ekahle yokuphumuza umoya, enobhavu ongaphandle ongacwiliswa kuwo kanye nezivini ezivelele namabhishi uhambo olufushane nje lwebhayisikili.
Ikhabethe elibanzi lamapulangwe e-rustic elinezicabha ezinkulu zesi-french kanye nombhede onethezekile wosayizi wendlovukazi.
Ishawa nokugeza kwangaphandle (isitayela sokucwebezela)
Nethezeka ngaphansi kwezinkanyezi kubhavu wangaphandle. Noma ujabulele ukugeza izicabha ze-shutter zivuliwe ukuze ubuke insimu yezithelo.
Ishawa nendlu yangasese yizakhiwo ezihlukene ezitholakala kumamitha ayi-10 ukusuka endlini enkulu yokulala.
Amathawula kanye nezinsiza zenhlanzeko eziyisisekelo zihlinzekwa.
I-Patio kanye ne-BBQ:
Khanyisa i-grill bese umeme abangani bakho ukuze ujabulele indawo yangaphandle, noma umane uyijabulele uwedwa. Ivulandi ingajabulisa izivakashi ezengeziwe ngetafula elikhulu nezihlalo. I-BBQ enkulu iyatholakala ukuze iphekwe ngaphandle.
Ikhishi linendawo yokuhlala encane abantu ababili, i-toaster, iketela, i-microwave, ifriji, usinki omncane, nezinto zokupheka zikagesi. Jabulela ukudla kwasekuseni ngokubukwa kwengadi yezithelo.
Kuhlinzekwa ikhofi le-plunger, itiye, nobisi.
Njengoba kunesitolo sendawo ezansi nomgwaqo, inqola yekhofi ethengisa amakhekhe e-artisan, kanye nenqwaba yamawayini asendaweni anikeza i-brunch, isidlo sasemini, nesidlo sakusihlwa, ungakhetha ukuhlola indawo ye-kai yakho noma wenze okuthile ekhaya.
Ikhaya lethu lingaphesheya komgwaqo futhi siyatholakala ukukusiza uma usidinga. Sicela ukhululeke ukuza uzongqongqoza emnyango wethu noma usithumelele umyalezo uma udinga usizo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hastings namaphethelo